५ वर्ष ८ महीनामा रू. १६ अर्बभन्दा बढीको चिनी आयात | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) ५ वर्ष ८ महीनामा रू. १६ अर्बभन्दा बढीको चिनी आयात
on: May 24, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
काठमाडौं । नेपालमा ५ वर्ष ८ महीनामा रू. १६ अर्बभन्दा बढीको चिनी आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७०/७१ देखि आव २०७५/७६ को फागुनसम्म नेपालमा रू. १६ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँको ३० करोड ६४ लाख ६३ हजार ७८१ किलो चिनी आयात भएकोे छ । यस अवधिमा ४८ लाख ५४ हजारको ७९ हजार ३०८ केजी चिनी निर्यात भएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालले १४९ भन्दा बढी देशसँग चिनीको कारोबार गरेको देखिन्छ ।
आव २०७०/७१ र २०७१/७२ मा चिनीको निर्यात घट्दै गई शून्य भएकोमा त्यसपछि निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । शुरूका ३ वर्षमा आयात घट्दै गएकोमा त्यसपछि २ वर्ष उच्च गतिमा आयात बढेको छ । चालू आव २०७५/७६ मा चिनी आयातमा भन्सार शुल्कमा वृद्धि र परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाइएकाले चिनी आयात घटेको छ । विभागको तथ्यांकले एकै वर्षमा चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको देखाएको छ । विभागका प्रवक्ता राम वाग्लेका अनुसार हरेक वर्ष एकै गुणस्तरको चिनी आयात र निर्यात नभएकाले चिनीको मूल्यमा फरक परेको हो ।
५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा शुरूका २ वर्ष उखुको चिनीको अत्यधिक आयात र केही मात्रामा चुकन्दरको चिनी आयात भएकोमा त्यसपछि भने यसको उल्टो भएको छ । आव २०७२/७३ मा उखुको चिनी आयातमा कमी आई चुकन्दरको चिनी धेरै आयात भएको देखिन्छ । यसपछि भने क्रमशः चुकन्दरको चिनी धेरै र उखुको चिनी कम आयात हुन थालेकोमा २०७३/७४ मा उखुको चिनीको कारोबार नै नभएको पाइन्छ । सो आवमा चुकन्दरको चिनी १८ लाख ३१ हजार ६२५ किलो आयात र ८०० किलो निर्यात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा चुकन्दरको चिनी उत्पादन हुने गरेको छैन, तर विभागको तथ्यांकमा निर्यात पनि भएको देखिएको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा अन्य मुलुकबाट चाहिनेभन्दा बढी आयात भएको केही सामान पुनः फिर्ता हुने गरेको छ । चुकन्दरको चिनी पनि आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएपछि फिर्ता गरिएको हुनसक्ने र निर्यातमा त्यो तथ्यांक देखिएको हुनसक्ने उनले बताए ।
चिनी उखु विशेष : क्षेत्रफल बढ्यो, बढेन उत्पादकत्व
चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज असारसम्म थप, बिहीवार सरकारका प्रवक्ताले केही बताएनन्